एमाले बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै, को को निकालिँदैछन् पार्टीवाट ? – Khabar Patrika Np
एमाले बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै, को को निकालिँदैछन् पार्टीवाट ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: १०:३०:३०
काठमाडौ । नेकपा एमालेमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आइतवार प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि विवाद थप चुलिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपालबीच थप दुरी बढेको छ । एमालेले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेताहरु एमाले नेताहरु पार्टी भित्र नरहने घोषणा गरेको थियो ।
पार्टीको त्यस्तो निर्देशनको वेवास्ता गर्दै केही नेताहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा ओली पक्षका सांसद पनि छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ११ बजे बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका हुन्। आजको बैठकले के निर्णय गर्छ सबैको चासो छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ।
एमालेका २२ जना सांसदले देउवाको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका छन्। भने १० जना सांसदले मतदानमा भाग लिएनन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले देउवालाई मत दिए। जसमा अध्यक्ष ओली पक्षका पनि आठ सांसद रहेका छन्। नेपाल पक्षका १० जना सांसदले मतदानमा भाग लिएनन्। यस विषयमा पनि आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समीक्षा हुने कार्यालय सचिव तामाङले जानकारी दिए।
बैठकमा नेपाल समुहलाई निम्ता दिइएको छ तर नेपाल पक्षको कुनै प्रतिकृया भने आएको छैन । नेपालसंग थप रिसाएका ओलीले देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने सम्भावना छ ।